China Gland kurongedza Chisimbiso Mugadziri uye mutengesi | Winclan
Gland yekuisa chisimbiso ndiyo yakajairwa fomu yekuisa chisimbiso yakagamuchirwa kune akawanda slurry pombi kunyorera nekuda kweiyo hukama hwakasimba, zvishoma nezvishoma kutadza maitiro uye nyore kwekuchengetedza.
ANATOMY YENZVIMBO CHISIMBISO
Chisimbiso chegland chine mukamuri (Stuffing Bhokisi) iyo inogara dzimba dzekumira dzakamira seLantern Rings, Neck Rings uye Gland Packing. Iyo kamuri inobvumidza yekutsvaira mvura kuti ipe chikafu munzvimbo yekuisa chisimbiso kuburikidza neyegomba gomba. Kupfuura nepakati pekamuri iri shaft inogona kunge iine yekubaira yekupfeka ruoko iyo inotenderera ichipesana nekumira kurongedza mukamuri yekunamatira kana bhokisi rekuzadza. Kumanikidza kunoiswa pakati pekurongedza uye ruoko rwe shaft kuburikidza neanotevera gland iyo painosimbiswa inomanikidza kurongedza, izvi zvinoumba tambo yekuisa chisimbiso pakati pesleeve nekurongedza, pakati pekumanikidza kuri mupombi nemweya uri kunze kwepombi.
Nomuzvarirwo kukwesana uku kunogadzira kupisa kwekuti chinangwa chemvura inoyerera kuita zvarinotaura, kumenya uye kutonhodza tambo yekuisa chisimbiso pakati pezvakamira uye zvinotenderera zvikamu. Mukati meye slurry pombi iyo inogona kupomba kwete chete zvakaomeswa chigadzirwa asi zvakare acidic kana alkaline mhinduro mvumo inoda kuitwa kuti ideredze kwete chete mhedzisiro yekukakavadzana pakati pesleeve nekurongedza asiwo ngura uye kukukurwa.
KUKUNDA MAMODZI EGLAND ZVISIMBISO
Iko kune matatu makuru mafomu ekurwiswa pazvisimbiso zvegland mune slurry pumps zvinotungamira mukuvhara chisimbiso. Izvi zvinogona kuve zvemunhu kana zvakasanganiswa mhedzisiro.
1. Ngura - Inowanzo kukonzerwa neiyo hyper saline kana yemakemikari nharaunda ine zvisirizvo zvekusarudzwa kwezvinhu. Kunze kwemakemikari akanangana kana kukanganiswa kwemhedzisiro pazvinhu crystallization kutenderedza chisimbiso nzvimbo dzinogona kusanganisa kutadza kuburikidza nekukukurwa kwenzvimbo.
2.Erosion / Wear - Kazhinji zvinokonzereswa nekuda kwekusvibiswa kwenzvimbo yekuisa chisimbiso nekutsveta kuri kupombwa kuburikidza nekushomeka kwekuyerera uye kumanikidza kwekuvhara mvura, kunogona kukonzereswa kuburikidza neiyo fluid crystallization kana kuburikidza nesimba rakawandisa rinoshandiswa pakati pekuisa chisimbiso nzvimbo pamusoro pekusimbisa kweye anotevera gland. .
3. Kukakavara - Kazhinji kunokonzerwa kuburikidza nekushingairira gland kugadzirisa kuti ibudirire padyo zero leakage. Nekudaro izvi zvinokonzeresa kuputsika kwemvura inoyerera mukutonhorera kwegland. Yese gland yakavharirwa pombi dzakagadzirirwa kudonha uye dzinofanirwa kubvumidzwa kunonoka kana kudonha nekukurumidza kwemvura inoyerera kubva kwavari kuti itonhorere kutonhora nekutsvaira kana tambo yekuisa chisimbiso.
Iko kutadza kutenderera kwechisimbiso gland inowanzo fambira mberi nekuda kwekusimba kweyakagadzirwa iyo ine yakasarudzika redundancy, gland chisimbiso kutadza hakuwanzo kuitika ipapo ipapo. Simba ndiyo fomu yekusakundikana, fizikiki inotitaurira kuti simba rinotevera nzira yekushomeka. Mukati meganda rinosimbisirwa nekuda kwekusanganiswa kwemamiriro ari pamusoro apa simba riri kuchinjiswa nekupararira munzvimbo dzekuisa chisimbiso, simba iri rinogona kunge riri muchimiro chemakemikari, kugona, kinetic nezvimwe zvinofambidzana neaya mvura kana zvisvinu mukamuri. . Saka zvakasikwa zvinwiwa / zvisimba zvichatsvaga kusunungura kana kuendesa simba ravo kune chisina kusimba chinhu mukamuri iri kurongedza. Izvi ndizvo chaizvo zvakagadzirirwa gland chisimbiso, kurongedza ndicho chinhu chikuru chechibairo mukamuri uye nekudaro chinoshandurwa kakawanda kupfuura zvimwe zvinhu.
Nekudaro nekufamba kwenguva gland kurongedza kwakawedzeredzwa kusvika padanho rekuti zvakakosha zvakadai seKevlar, Carbon Fibers uye Teflon zvakaverengerwa mukugadzirwa kwayo, izvi zvakakonzera kuti kurongedza kuve kwakanyanya kugadzikana uye kukwanisa kuramba kupfeka kana kupaza simba kune mamwe nzvimbo dzekamuri yekuisa chisimbiso, kureva yechipiri chibayiro chinhu chiri shaft ruoko.
Shaft sleeve pamwe nemwenje nemaringi emutsipa ingangove yechipiri akachinja zvakanyanya zvikamu zvegland chisimbiso system. enhoroondo maoko akagadzirwa kubva alloys ayo akaoma kupfeka kupfuura gland kurongedza kuitira kuti vagare kwenguva refu. Asi sekurongedza kwakashanduka musimba uye dhizaini nemumaoko akareba ehurefu hwehupenyu hwakave nekuchinjwa nekutakura macircuit kana kukwidziridzwa kuburikidza nezvinhu zvitsva, masystem ekumonera kana mubatanidzwa wezvose zviri zviviri. Akawedzeredzwa maoko ayo anopa akaoma machira ekupfeka kuramba anogona kubva aburitsa chizvarwa chitsva kurongedza uye nekupa kunowedzerwa hupenyu hwebasa pamutsetse wekusimbisa. Zvisinei akawanda maratidziro masisitimu ane yavo yekuzvarwa dhizaini kukanganisa uye kushaya simba uko kana kusingatsigirwi nekukwana kwakaringana kwekumhanyisa uye kutonhora mvura kunogona kutungamira kukurumidza kukundikana kwechisimbiso gland.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve kutadza kwemaoko akavharwa maoko ndapota tarisa kune yedu CIS Sleeve peji.
KUKUNDA MODZIDZO RUDZO
Matanho ekuderedza mhedzisiro yegland chisimbiso kutadza nzira dzinosanganisira.
1. Kuisa chisimbiso Kugadziridza - Kuona kuti iwe wasarudza chaiyo yekuisa chisimbiso gadziriso yebasa uye maitiro mamiriro. Parizvino pane zvakawanda aftermarket zvigadzirwa zviripo izvo zvinopa zvinowedzerwa kupompa chisimbiso pamusoro pekutanga dhizaini, yega yega inopa inoda kuongororwa pane zvayakada uye zvakafanira kutarisisa kwete kwete chete pombi basa asi maitiro ezvinhu.
2. Flushing Water - Kuona kuti gland rine gadziriro yakafanira yezvikamu zvine yakakwana yakachena yekuyerera mvura pakumanikidza chaiko uye kuyerera. Zvinopfuura makumi mapfumbamwe muzana zvematambudziko ekuisa chisimbiso anokwanisa kuteverwa kumashure kune kukwana kwakaringana kwemvura yakachena inoyerera pakumanikidza chaiko, nekugadzirisa gland kwakakodzera.
3. Kusarudzwa kweMidziyo - Sarudzo yezvakakodzera zvinhu zvinoenderana nemamiriro epombi uye kuwanikwa kwemvura inoyerera.
Stuffing Bhokisi - Mumakemikari anoshanda inert zvinhu zvinoda kushandiswa kunyangwe akawanda makemikari inert zvinhu hazvina kuomarara kupfeka saka zvinhu zvinokanganisa zvinogona kuda kusarudzwa izvo zvinopa mwero wehupenyu hwekupfeka uye kusagadzikana kwemakemikari. Zvekupfeka mabasa zvakaomesesa zvinhu zvinogona kushandiswa asi iwe uchafanirwa kuziva kuti zvakanyanya kuomesa izvo zvinhu zvino kazhinji zvakaderera simba remuchina uye rinotevera rekumanikidza simba. ZveMakemikari uye zvakaoma kupfeka kunyorera iwe unoda chinhu chakapfeka uye chemakemikari anodzivirira. Kune ino nharaunda Slurrytech yakagadzira iyo SB-WRC (Stuffing Bhokisi - Wear Resistant Carbide kumeso), chisimbiso ichi chakavakwa kubva kumakemikari anodzivirira chiwanikwa Stuffing Bhokisi neakaomeswa kusungira kumeso kweWRC (Wear Resistant Compound) yakaratidzwa kune yakasara the chamber.
Shaft Sleeve - Kuisa maoko maoko kutenderera nepombi shaft kumisidzana yakamira mhete yekurongedza mubhokisi rekuzadza. Basic zvinhu mamakisi emaoko ari akaomeswa isina simbi uye kazhinji akasimba kwazvo, mapampu anomhanyisa aya maoko anowanzove nekukanganisa zvishoma nezvishoma kwekusimbisa gungano. Matsva echizvarwa chitsva anowanikwa aine akasiyana siyana akaomeswa machira uye maitiro ekushandisa eaya. Mazhinji maoko akaputirwa anotambura nekuparadzaniswa kwemidziyo yezvinhu pakati peiyo substrate uye iyo yekumhara iyo inogona kutungamira kukurumidza kukundikana kwechisimbiso cheshuga. Slurrytech CIS sleeve akagadzirirwa kupa yakaoma kupfeka nzvimbo inoiswa mukati meiyo substrate kudzivirira echinyakare kukundikana nzira dzeakawanda ekuputira masisitimu. Ndokumbira kuti uone CIS Sleeve peji. kuti uwane rumwe ruzivo pane edu maoko.
Kuputira Gland - Yemazuva ano gland kurongedza kunouya mune mamwe marudzi, kuputira uye musanganiswa wezvinhu kupfuura zvati zvamboitika kare. mutemo wakakosha nekurongedza ndeyekuona kuti unoenderana nekurongedza kwemakemikari, ekupfeka uye gland zvigadzirwa zviri kushandiswa pamwe nekufunga nezvekuwanikwa kwemvura yegland uye kumanikidzwa. Zvese izvi zvinhu zvinokonzeresa kuti zvakanaka sei kwete chete kurongedza asi ruoko uye zvimwe zvinhu zvinomira munzvimbo dzebasa. Nehurombo hapana mhando imwechete inokodzera zvese mamiriro dhizaini yekurongedza iripo.
KuSlurrytech takagadzira yedu yega nzira yekutakura iyo ine Kevlar dzakarukwa makona esimba, dzakarukwa Teflon madziro ekuderedza kukwesana uye yakasungwa graphite musimboti wekukwirisa uye zvisimba zvinotora.
Gland dzese dziri mune slurry mamiriro dzichatambura nekusviba kwemvura nekufamba kwenguva, takagadzira kurongedza kwedu neizvi mupfungwa kuti ive nekwanisi yekutora nekumwa zvinosvibisa kwete kuzvisunga pakati pesleeve nekutakura. Giredhi redu rekutakura rinoshanda zvakaenzana musanganiswa kana zvedongo zvakavezwa shaft sleeve uye inokodzera huwandu hwakasiyana hwePH mazinga uye pombi kumanikidza.
Pashure: Slurry Pump Base-003